RESS App 2022 Download ho an'ny Android [vaovao] | APKOLL
RESS App 2022 Download ho an'ny Android [Vaovao]
Androany izahay dia eto miaraka amina fampiharana iray, izay tena ilaina ho an'ny mpiasan'ny Railway Indiana ary koa ho an'ny olona te-hiditra ao amin'ny departemantan'ny Railway. Ity fampiharana mahagaga ity dia fantatra amin'ny anarana hoe RESS App, izay manome ny fampahalalana rehetra momba ny mpiasa, toy ny Payslip, Pension, sy ny maro hafa.
Manolotra vaovao mifandraika amin'ny fandraisana mpiasa vaovao ao amin'ny departemantan'ny lalamby ihany koa izy io, izay havaozina amin'ny alàlan'ity fampiharana ity. Misy lafin-javatra maro hafa ho an'ny mpiasa misotro ronono, fa raha te hiditra amin'izy ireo dia mila mandalo dingana tsotra ianao.
Hizara ny fampahalalana rehetra momba ity app ity izahay. Raha te hampiasa an'ity fampiharana ity ianao dia tokony hahafantatra kely momba izany alohan'ny hampiasana ny fampiharana. Mijanòna kely fotsiny aminay dia hizara ireo endri-javatra mahatalanjona kokoa amin'izany izahay.
Topimaso momba ny RESS App
Fampiharana Android maimaim-poana izy io, izay novolavolain'ny CRIS (Center Railway Information System) mba hahatonga ny rafitra fiasan-tena ho an'ny mpiasa manontolo. Izy io dia manolotra azy ireo hanamarina ny firaketanao manokana toy ny sata momba ny asa, ny mombamomba ny tena manokana, ny hetra fidiram-bola, ny antsipirihan'ny tambin-karama, ary ny maro hafa.
Araka ny efa fantatrao amin'izao andro izao dia tian'ny olona ho fantatra ny momba ny asany manokana. Manamora izany ny CRIS amin'ny fanomezana fomba tsotra amin'ny alàlan'ity fampiharana ity. Ny mpiasa rehetra dia afaka miditra amin'ny mombamomba azy mifandraika amin'ny karama, ny famerenan'ny rafitra fisotroan-dronono nasionaly, sy ny hafa.
Ny zavatra mahagaga indrindra azonao alaina dia Payslip, afaka misintona payslip ianao izao. Izy io dia manolotra anao hisintona Payslip amin'ny rakitra PDF, izay azonao ampiasaina amin'ny hetra amin'ny fidiram-bola, fampindramam-bola, hofan-trano, ary fangatahana fampindramam-bola, ary ny tena zava-dehibe dia ny porofo fa mpiasa ianao eto.
Ho an'ireo olona misotro ronono rehetra dia manome ny NPS izy io, ahafahanao manamarina ny mombamomba ny fisotroan-dronono, ny tombony ary ny zavatra hafa. Izy io koa dia mampiseho ny fihenan'ny karama sy ny antony fanesorana, izay tsy hitanao alohan'ny fampiharana ity.
Mba hidirana amin'ireo endri-javatra rehetra ireo dia mila misintona RESS Apk fotsiny ianao ary apetrakao. Hizaranay ireo dingana etsy ambany ireo saingy fantaro ny andao hampiasa ny fampiharana ity. Raha vantany vao nametraka ity rindrambaiko ity ianao. Avy eo dia mila mandefa azy ianao ary mamela ny alalana rehetra ilaina.
Avy eo dia mila manoratra ny kaontinao ianao, mba hanaovana izany dia tsy maintsy miditra zavatra telo ianao. Ny voalohany dia ny nomeraon'ny mpiasa, ny faharoa dia ny laharana finday ary ny farany dia ny daty nahaterahana. Rehefa nanome tanteraka an'io fampahalalana io ianao dia halefa any amin'ny laharana finday ny kaody ho fanamarinana.
Tokony ampidirinao ao anaty app ilay kaody ary hamarininao izany. Vantany vao voamarina ny kaody dia vonona ny handefa ny kaontinao. Azonao atao ny miditra amin'ireo rindranasa avy amin'ny rantsantananao. Afaka mahazo fampahalalana momba ny taom-panompoanao manontolo ianao.
Anaran'ny fonosana cris.org.in.ress
Developer Ivotoerana momba ny Rafitra fampahalalana momba ny lalamby
Endri-javatra manan-danja amin'ny RESS App
Rehefa nizara ny sasany amin'ireo endri-javatra ao amin'ny fehintsoratra etsy ambony izahay, dia misy zavatra hafa hozaraina aminao. Hanao lisitra tsotra amin'ireo endri-javatra fototra isika, izay hitako fa mahaliana kokoa momba ity app ity. Azonao atao koa ny mizara ny traikefanao aminay amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Fiampangana tsy misy vidiny
Midira amin'ny antsipirian'ny karamanao
Payslip amin'ny PDF
Antsipiriany momba ny fanampiana
Fampahalalana momba ny hetra
Ahoana ny fampidinana RESS Apk?
Raha te haka an'ity fampiharana ity ianao dia afaka mitsidika ny Google Play Store. Fa raha manana olana amin'ny fidirana amin'izany ianao dia azonao atao ny misintona azy amin'ity pejy ity. Manome rohy azo antoka sy miasa izahay. Mila mitady ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay eo ambony sy ambany amin'ity pejy ity.
Raha vantany vao nahavita ny fizotry ny fisintomana ianao dia aza adino ny mamela ny 'Loharano tsy fantatra' avy amin'ny fametrahana Security. Aorian'izany dia azonao atao ny mametraka azy amin'ny fitaovanao.
RESS App no ​​fampiharana Android farany, izay afaka manampy ny mpiasan'ny lalamby maro hahazo ny antsipiriany fototra momba ny taona niasan'izy ireo, sy maro hafa.
Dika beta ity, ka raha manana olana amin'ity fampiharana ity ianao. Aza misalasala mifandray amin'ireo mpamorona ofisialy ary raha manana olana amin'ny fampidinana ianao dia afaka mifandray aminay.
Sokajy Apps, famokarana Tags Fitsaharana, RESS Apk, RESS App Post Fikarohana
Among Pink Apk 2022 Download Ho an'ny Android